Axsaabta xukuumadda wadaaga ah ee dalka Giriiga oo aqlibiyadoodii baarlamanka dhumiyey – Radio Daljir
Axsaabta xukuumadda wadaaga ah ee dalka Giriiga oo aqlibiyadoodii baarlamanka dhumiyey
Athens May 07 -Labada xisbi ee maamula dalkaasi Giriiga ee taageersan qorshaha gunti-giijiska ayaa dhumiyey aqlabiyadii ay ku haysteen baarlamanka dalkaasi.
Xisbiga bidix-dhexe ee Pasok iyo xisbiga kale ee midig-dhexe ee New Democracy ayaa tan iyo bishii November ee sanadkii hore ku jiray xukuumad wadaag ah,laakiin doorashadii axaddii shalaytoole ayey ku guuldarraysteen in ay sii wadaan isbahaysigaasi.
Codadkii la dhiibtay axadii ayaa xisbiga midig-dhexe ee New Democracy helay 19%, isagoo hoos uga soo dhacay 33.5% oo uu helay doorashadii sanadkii 2009-kii.
Xisbiga bidix-dhexe ee Pasok ayaa isaguna codadkii axaddii la dhiibtay helay 13.2%,waxana uu hoos uga dhacay 43.9% ee doorashadii ugu dameysay,laakiin xisbiga garabka bidix ee isbahaysiga ku jira ee Syriza ayaa galay kaalinta labaad isagioo helay 16.7%.
Xisbiga neo-Nazi Golden Dawn ayaa markii kowaad soo gelaya baarlamanka ,waxana xisbigaasi uu helay 7% .
Hogaamiyaha midig-dhexe ee New Democracy Antonis Samaras ayaa mar uu hadlay sheegay in uu soo dhisayo dowlad badbaado qaran oo dalkaasi ku sii wadaysa jidka ah in uu ku sii jiro aagga Euro.
Dowladda cusub ee la soo dhisayo ee dalkaasi Giriiga ayaa u igman in ay meelmariso qorshayaasha gunti-giijiska ee dalkaasi Giriigu uu lacagaha samata-bixinta ah ah kaga helayo midowga Euroope , bangiga dhexe ee Europe iyo sanduuqa lacagta ee caalamiga ag ? ee waxa loo yaqaan Troika.
Axsaabta siyaasadda ee Pasok iyo New Democracy ee dalkaasi Giriiga ayaa si weyn uga muuqday siyaasadda dalkaasi Giriiga ee wixii ka dameeyey todobaatanaadkii ,laakiin axsaabta kale ee siyaasada ee yaryarka ah ayaa immika u muuqda kuwo fursadaha jira ka faa?iidaysanaya oo soo baxay.
Dalka Giriiga ayaa waxaa haysta dhibaato dhinaca maaliyadda ah, iyadoo baarlamanka dalkaasi iyo xukuumadda wadaaga ah ay hore u meelmariyeen mashruuca gunti-giijiska ee dalkaasi uu lacagaha samata-bixinta ah kaga helayey dhinacyada reer Europe iyo IMF ,laakiin inta badan dadka Giriiga ayaa si weyn u diidan qorshahaasi gunti-giijiska ah,inkastoo dadka arrimahan la socdaa ay sheegayaan in culayska qorshaha gunti-giijisku uu yaraan doono madaama la doortay murashaxii madaxtinimada Faransiiska ee Francois Hollande oo isagu qorshahan ka ka horjeeda ama diidan.